Date My Pet » Nzira Yokukunda Pashure Break Up
Last updated: Sep. 16 2020 | 2 Maminitsi verenga
Bvisai Ben & Jerry zvaJehovha. Uye chinu nyama. Nokuti inguva kubuda imomo uye akaisa upenyu hwako shure pamwe chete. Hazvina kuzova kufanana inoshamisa kudanana firimu apo iwe pakarepo kuwana pamusoro munhu uye kune rinotevera vari nekubwaira kweziso. Asi nokusvika ipapo uye kuchengeta pfungwa dzako vanoshingaira here achafunga zvakawanda pamusoro yokuzorora-uye nokufamba kwenguva manzwiro achasvava uye kuti neshinda risingaoneki riri latching zviende mwoyo wako vachadzityora achibatsirwa zvinotevera zvitatu:
Kana iri basa rako kana yokuzvidira basa kana musanganiswa vaviri kana pakoreji kana basa ruzivo, ramba wakaisa pfungwa iyoyo. Yeuka kuti izvi zviri ramangwana rako uye usarega vamwe zororo-up kuwana munzira kunyange zvazvo vanganzwa zvakaoma chaizvo panguva kwete. Uyewo zvaungakwanisa kutora kirasi manheru. Just Usazvionza kunze kwacho. Chete kutora yezvauri vaigona!
Taura nezvazvo nevanhu imi hanya. Nepo kupfeka nomutsipa yokumusoro muromo kunze nyika hapana kunyara pakuputsa pasi uye kurega manzwiro ako pamusoro yokuzorora-up vulnerably zvichienda mhuri uye shamwari. Izvi kuchaita pfungwa dzako uye musoro wako iwayo misodzi kuti anobuda kubuda kana uchiziva kana kuti kwete. Saka vanhu vazhinji vanoedza kurarama yokumbozorora-up on dzavo uye hazvina utano. Nokutaura nevanhu vanokuda pamusoro zviri kukuvadza iwe iniwo uchakwanisa kutora nyika ine zvikuru chichiwedzera nepfungwa dzakazorora uye meso kupenya.
Ndinoziva kuti dzimwe nguva zvingatiomera kuita unakirwe paunenge vachikuvadza. Asi edza kwenyu chakaomesesa kusunda kuburikidza nokuti zvichava zvakakodzera pakupedzisira. Enda panze (kana hausi akaputsa!) uye ufare nemhuri kana shamwari iri the pub, panguva Concerts kana musicals, nezvimwewo … Siya matambudziko ako pamba. Ramba uri kufarira uye hunofadza zvinhu zvakadai sokuverenga, mimhanzi uye uchiona TV. Usazvirega kurasikirwa kunge munhu uri nokuti kamwe iwe kuzviita inogona rokubvisa mugwagwa kudzokera apo makanga. Tora nguva yako yokuwana nerudo rutsva. Usafunga aomerwa nezvinhu munhu kudaro. Munguva yako, regai rudo.
Ko Online Dating For vakundwa?